हाम्राे पिपलबाेट » प्राथमिक उपचारकै अभावमा अस्पताल परिसरमै मृत्यु प्राथमिक उपचारकै अभावमा अस्पताल परिसरमै मृत्यु – हाम्राे पिपलबाेट
प्राथमिक उपचारकै अभावमा अस्पताल परिसरमै मृत्यु
नेपालमा कोरोनाको प्रभाव भयावह रुपमा देखिन थालेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमितले उपचार नपाएर छटपटिदैं मृत्युवरण गरेको समाचार बनिरहँदा नेपालमा समेत त्यसप्रकारको दृष्य देखिन थालेको छ ।
बाँकेकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कोरोना संक्रमितहरुले समयमै उपचार नपाएर दिनहुँ ज्यान गुमाईरहेका छन । जिल्लाका ठुला अस्पतालले अक्सिजन र बेड अभावमा संक्रमितिलाई भर्ना गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन । डरलाग्दो रुपमा फैलिएको कोरोनाले बाँकेमा अझैं विकराल रुप लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
यसैबिच शुक्रबार नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको प्राङ्गणमा एक कारुणिक घटना घटेको छ । कोरोना संक्रमणको आशंकामा पिसिआर परिक्षण गर्न आएका एक ब्यक्तिको लाईनमा पालो कुर्दै गर्दा मृत्यु भएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका ५ का ति पुरुष कोरोना परिक्षणकालागि पालो कुरीरहेका थिए । आफन्तसँगै अस्पताल पुगेका ति पुरुषले आवश्यक प्राथमिक उपचारकै अभावमा अस्पताल परिसरमै ज्यान गुमाएका हुन ।
अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा कार्यरत डा. देबेन्द्र आचार्यले सामाजिक संजाल फेसबुकमा मृतकको तस्बिर शेयर गर्दै दु:ख ब्यक्त गरेका छन । डा. आचार्यका अनुसार अस्पताल परिसरमै ज्यान गुमाएका ति पुरुषलाई आफन्तले रिक्सामा राखेर घर फर्काएका छन । यद्यपी उनको अझैं कोरोना परिक्षण गरीएको छैन ।